Soomaaliya 2020 maka dhici kartaa doorashada qof iyo cod? - Caasimada Online
Home Warar Soomaaliya 2020 maka dhici kartaa doorashada qof iyo cod?
Soomaaliya 2020 maka dhici kartaa doorashada qof iyo cod?
Muqdisho (Caasimada Online) – Shaki badan ayaa laga qabaa suurto galnimada in afar sano ka dib ay Soomaaliya ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay ka qeyb galaan, balse guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo shaqadaan isaga looga fadhiyo ayaa doonaya inay hirgaliyaan doorasho qof iyo cod, Hase ahaatee waxaa ku hereereysan caqabado badan oo u baahan in xal loo helo .
Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibaraahim oo wareysi gaara siisay Idaacadda Goobjoog oo kamid ah idaacadaha Muqdisho ayaa waxay sheegtay inay jiraan caqabado hortaagan in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2021ka